Ndiani Mutungamiriri Nyowani weIran weHurumende Hon. Akasungwa Ezatullah Zarghami
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Iran Kuputsa Nhau » Ndiani Mutungamiriri Nyowani weIran weHurumende Hon. Akasungwa Ezatullah Zarghami
Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • Iran Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Ezzatollah Zarghami, Gurukota Rezvekushanya Iran Kutendeseka: Khamenei.ir -
Mutungamiri mutsva weIran akasarudza Hon. Seyed Ezatullah Zarghami seMutungamiriri mutsva weCultural Heritage uye Tourism. Aive Mutevedzeri wegurukota muTsika neIslam Ministry pamwe neDhipatimendi reDziviriro asati abata chigaro semukuru weIslamic Republic yeIran Broadcasting kubva 2004 kusvika 2014.
Ebrahim Raisi, purezidhendi mutsva weIslamic Republic of Iran, akagadza dare remakurukota muna Nyamavhuvhu 8. Paramende ichafanirwa kubvumidza nhengo dzese dzemakurukota dzakasarudzwa.
Bazi reIran reCultural Heritage uye Tourism ichave na Hon. Seyed Ezatullah Zarghami akagadzwa segurukota idzva.
Muna 2018 Iran yakanga iine vangangoita mamirioni masere evashanyi vekunze.
Iran ndiyo imwe yenyika dzepasichigare pasi rose uye yanga iri pakati penzvimbo dzinofungisisa uye dzakaomarara kubva pakutanga. Kune zvinhu zvehupenyu hweIran izvo, neimwe nzira kana imwe, zvakabata anenge munhu wese wepanyika. Asi iyo nyaya yekuti zvakaitika sei, uye kukosha kwakazara kwezviitiko izvi, kazhinji hazvizivikanwe uye zvinokanganikwa.
Iyo Iran Tourism uye Yekushanya Sangano inotsanangura kushanya kuIran tichiti Kufamba kuenda kuIran. Persia, iyo Nyika yemwaka mina ine yakapfuma uye ine nhoroondo nhoroondo, zvisingaverengeke zviyeuchidzo, Iranian mutsa uye chikafu chinonaka.
Tyeduism in Iran yakasiyana, ichipa zviitiko zvakasiyana siyana kubva pakukwira uye kusvetuka mumakomo eAlborz neZagros, kumazororo emahombekombe nePersian Gulf.
Iran yakarohwa zvakanyanya neCOVID-19 uyezve neindasitiri yayo yekufambisa neyekushanya.
Indasitiri yeIran yekushanyirwa yakarasikirwa nemakumi matatu emamirioni mazana matatu emamiriyoni ($ 320 bhiriyoni pamutengo wepamutemo wekutsinhana emarial 7.6 padhora) kubva pakatanga chirwere checoronavirus, ISNA yakashuma neChipiri.
Denda iri rakanganisawo mabasa anodarika zviuru makumi mana nezvina muzana munzvimbo yainge ichangotanga yenyika, mushumo wakawedzera.
Nekuda kwekuputika kwe coronavirus muIran uye nekuzotevera kushaya basa uye kurasikirwa nemari, nzvimbo dzekugara dzakatambura zvakanyanya. Aya manhamba anovhara iyo nguva pakati paFebruary 2020 uye chitubu cha2021.
Nzvimbo dzekugara dzakatora zviuru mazana maviri nemakumi masere emabhiriyoni (madhora zviuru mazana matanhatu nematanhatu emadhora) akarova kubva kuhutachiona, nepo vanopfuura vashandi zviuru makumi maviri nezviviri munzvimbo idzi varasikirwa nemabasa panguva yakataurwa.
Masangano evashanyi akange ari boka rechipiri rakanyanya kubatwa muindasitiri yekushanya, iine anopfuura mamirioni gumi emabhiriyoni ($ 10 mamirioni) ekukuvara uye vanhu vanopfuura zviuru zvitanhatu vasina mabasa kubva pakatanga.
Panyaya yebasa pamwe nekurasikirwa nemari, zvivakwa zvekushanya, eco-lodges, uye mafambiro ekushanya ari pakati pemapoka akanyanya kukanganisa muindasitiri yekushanya.
Ndiani iye Hon. Sayyid Ezzatollah Zargham, gurukota idzva rekushanya kuIslamic Republic yeIran?